न्यूज सञ्जाल: » माइभ्यालीका शरण सर्वोत्कृष्ट बन्दा अरु के भए ?
माइभ्यालीका शरण सर्वोत्कृष्ट बन्दा अरु के भए ?
न्यूज सञ्जाल २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १९:४७
इलाम । आयोजक माइभ्याली फुटबल क्लबका मिडफिल्डर शरण बस्नेत माइभ्याली गोल्डकपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका छन् ।
फाइनलमा आयोजक टोली मछिन्द्रसँग पराजित हुँदै उपविजेता बने पनि शरण उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका हुन् । शरणले सर्वोत्कृष्ट बनेसँगै १ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । आयोजक टोलीका गोलरक्षक देव लिम्बू उत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिंदा आयोजककै छिरिङ गुरुङ उत्कृष्ट डिफेन्स छानिए ।
मछिन्द्रका योगेश गुरुङ उत्कृष्ट मिडफिल्डर तथा आन्द्रेस निया उत्कृष्ट फरवार्ड भए । उपाधि विजेता मछिन्द्रकै प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल उत्कृष्ट प्रशिक्षक भए । विधागततर्फ सबै उत्कृष्ट खेलाडीले जनही २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
ठुलो टुँडिखेलमा भएको फाइनलमा दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा आन्द्रेस नियाले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई अग्रता दिलाए । त्यहि गोल जितका लागि पर्याप्त रह्यो ।
उपाधिसँगै मछिन्द्रले आठ लाख र उपविजेता माइभ्यालिले ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । फाइनलको म्यान अफ द म्याच गोलकर्ता आन्द्रेस नै भए । उनले १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
ए डिभिजन लिगको उपाधिपछि झापामा सताक्षी गोल्डकप जितेको मछिन्द्रले माइभ्यालीको सेमिफाइनलमा भारतको मानेभञ्जाङ फुटबल क्लबलाई हराएको थियो । आयोजक माइभ्यालीले भने लिगको दोस्रो टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सडनडेथमा हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो ।